कलैया ३ मा समाजिक संप्रदायिक दंगा फैलाउने दुश्प्रयास – CIN Nepal News & Online Radio Network
By CINN सम्वादाता	 पछिल्लो अपडेट Jul 10, 2020 136 0
कलैया उप-महानगरपालिका वडा न. ३ गंगा पुरमा निमुखा जनावर गाइको बछडा लाई निर्घात रुपमा हत्या गरिएको छ। कलैया बीरगंज जाने सडक खण्डको उत्तर पट्टी भतौडाको पुर्व र गंगा पुरको दक्षिण पट्टी बाँस बारीमा हत्या गरि हिजो राति फालिएको थियो। एका बिहान त्यहाका स्थानीयले हेरे पछि थाहा पाएको थियो। यस्ता निर्मम्तापुर्वक हत्या गरि समाजमा समाजिक सदभावमा खलल पुर्याउने काम मात्र गरेको स्थानिय हरुको भनाइ रहेको थियो।
पानी परि रहेको बेलामा नै यस्तो घटना गरे गराएको स्थानीयहरुको बुझाइ रहेको छ। यसबारे नगर प्रमुख राजेश राय यादव सित बुझ्दा आफुलाइ त्यस बारे केही जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। स्थानीय प्रशासनले त्यसबारे खासै केही चासो नदिएको स्थानीयहरुको भनाइ रहेको थियो। बाराका (डिएसपी) प्र.ना.उ. गौतम मिश्र संग बुझ्दा मलाइ यसको बारेमा थाहा नभएको यसबारे बुझ्ने बताए।
हिन्दु परिशद नेपालका अध्यक्ष संतोष पटेल संग बुझ्दा यो घटना साह्रै निन्दनीय रहेको बताए। यो घटनाले समाजमा समाजिक सदभामा खलल पुर्‍यएर समाजमा द्वन्द उत्पन्न गराउने कार्यगरेकोले यस्तो प्रतिगामीहरु लाई कानुनी उपचार गरि तहलगाउनु पर्ने बताए।
Total Page Visits: 196 - Today Page Visits: 6
हिन्दू परिषद नेपाल बीरगंज नगर कमिटी बिस्तार एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन
This Month: 8729